အမျိုးသားလွှတ်တော်က ခုံရုံးအားစွပ်စွဲပြစ်တင်သောအဆိုကို အတည်ပြု
EXAM PARTY များတွင် SEXY DANCE ထည့်သွင်းလာ၍ မိဘများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်
အာဆီယံလမ်းမကြီးဖြတ်သန်းမည့် နောင်ချိုအိမ်ခြံမြေဈေး ကျပ်သိန်းထောင်ချီရောက်ရှိ
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းထွက် ဒုတ္ထ္ထာရေသောက် သုံးခြင်းကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါမညီမျှမှုများ ဖြစ်ပေါ်
ဦးခေါင်းတစ်ခုစာ အသားပိုပါလာသော ကလေးငယ်တစ်ဦး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသလျှက်ရှိ
တောင်ကြီးမြို့ မှာ ၁၀ တန်းကျောင်းသားလေး အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်ခံရ၍ သေဆုံးမှု့ ဖြစ်ပွား
ခုံရုံးကို စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့် အဆိုဆွေးနွေးမှုအခြေအနေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ UNFPA ဒါရိုက်တာ Dr.Babatunde Osotimehin တို့တွေ့ဆုံ (ရုပ်/သံ)
ရဲတပ်ကြပ် တစ်ဦးက အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် အမျိူးသမီးကြီး တစ်ဦးကို ခဲနဲ့ ထုနှက်ရိုက်ခဲ့ပီး ရွှေထည် ပစ္စည်းတွေ လုယူ (ရုပ်/သံ)
မိတ္ထီလာတွင် စက်သုံးဆီဆိုင် မြို့ပြင်ပြောင်းရွှေ့ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် First Eleven Sports Journal အတွဲ ၁၃ အမှတ် ၁၃
သြဂုတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ ထုတ် အလင်းတန်း ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၇၁၉
မြန်မာ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု စောင့်ကြည့်ဖို့ အိုဘားမား အစိုးရကို အောက် လွှတ်တော်တိုက်တွန်း
ယနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၌ ခုံရုံးဝန်ထမ်းများ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်သည့်အဆို ဆွေးနွေးကြမည်
ဒီလှိုင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိရာရုံးခန်းရှေ့တွင် ပေါက်ကွဲ စေနိုင်သည့် ပစ္စည်းအချို့ တွေ့ ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမည်ပျက်စာရင်းဝင် ၂၀၈၂ ဦးအား အစိုးရမှ ပယ်ဖျက်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေစီး ရှေ့တိုးခြင်းလား? ရှုပ်ထွေးနေခြင်းလား?
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကို ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပို ရေးရှင်း အသွင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမည်
မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေကို အလကားပေးမယ်လို့ အကြံပြုခဲ့သူ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးဖြစ်လာ
မိုဘိုင်း ဖုန်းလိုင်း များကို အလကား ပေးရမည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အကြံပေး ကောင်စီဝင် ဦးသောင်းတင်အကြံပြု
Posted: 28 Aug 2012 04:18 AM PDT
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်း၊ ဥပဒေအရ ပေးအပ်သော တာဝန် များကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင် ခြင်းတို့အရ စွပ်စွဲပြစ် တင်သည့် အဆိုကို သြဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပသော အမျိုးသားလွှတ် တော် အစည်းအဝေး၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ် ရာ တက်ရောက်သော ကိုယ်စား
လှယ်အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကျော် ထောက်ခံသဖြင့် အထက်ပါအဆို မှာ အတည်ဖြစ်သွားသည်။ -----
Posted: 28 Aug 2012 03:44 AM PDT
ကျောင်းသား လူငယ်များ အနေဖြင့် စာမေးပွဲ ဖြေခါနီး စိတ်အပန်း ဖြေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တက်ရောက် လေ့ရှိသော EXAM PARTY များတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက SEXY DANCE COMPETITION များပါ ထည့်သွင်းလာ သည့်အတွက် မိဘများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန် လျှက်ရှိ ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ကြော်ငြာများအား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက လူသုံးများသော FACEBOOK ၊TWITTER ကဲ့သို့သော လူမှုရေး ကွန်ယက်များတွင် ထည့်သွင်းလာသလို RELAX ပြုလုပ်နိုင်ရန် နေ့လည် ၂ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိဟု ဆိုကာ ENTERTAINMENT တစ်ခုက လက်ကမ်း စာစောင် ဖြန့်ဝေနေခြင်းဖြစ်ပြီး အချို့ကြော်ငြာများတွင်GSM ကဒ်ပါ ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးဦးမည်ဟု ပါရှိသည်။
" အဲဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေ ခေတ်သဘောအရ ပေါ်ပေါက်လာတာကို နားလည်ပါတယ်။ သူတို့က စီးပွားရှာတာတော့ရှာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကို အခုလိုမျိုးဖျက်ဆီးတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ သူတို့လည်း ကျောင်းသားဘဝကနေ ကြီးလာကြတာပဲလေ။ သူတို့ နားလည်ရမှာပေါ့။ သားသမီးချင်းလည်း စာနာသင့်တယ်" ဟု ဒဂုံ တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က EXAM PARTY မှအပြန် ကျောင်းသားများ ရန်ဖြစ်ကြရာ သုံးဦးဒဏ်ရာရကာ နှစ်ဦးမှာ ပြင်းထန်ကြောင်းသိရသလို လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တွင် EXAM PARTY (၅)ခုဝန်းကျင် ရှိကြောင်း လူငယ်အသိုင်းအဝိုင်းက သိရှိရသည်။
နှစ်တိုင်းလိုလိုပင် အမည်မဖော်လိုသော ကလပ်များသည် ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နှစ်ယောက်ဝင်လျှင် တစ်ယောက်ဝင်ကြေးအခမဲ့ ရသောဆိုင်များ၊ ဘီယာလေးခွက်သောက်လျှင် တစ်ခွက်အလကားပေးသော ဆိုင်အမျိုးမျိုးရှိနေကြောင်း တွေ့ရ သော်လည်း ယခုနှစ်ကဲ့သို့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ကြော်ငြာမှုမျိုး မဟုတ်ပေ။
' အန်တီတို့တုန်းကဆိုရင် စာမေးပွဲနီးလာရင် စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီး တရားစခန်းဝင်ကြတယ်။ စာမေးပွဲနီးလေလေ အပျော်အပါးကို လျှော့လေပဲ။ အခုခေတ်ကလေးတွေက အဲလိုလုပ်ရတာကို ရှက်ဖို့ကောင်းတယ် ထင်နေကြတယ်။ မဟုတ်တာလုပ်တာကြတော့ ရှက်ရကောင်း မှန်းမသိဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘီယာ ဘယ်လောက် သောက်နိုင်တာတို့၊ ရည်းစား ဘယ်နှစ်ယောက် ထားတာတို့၊ မဟုတ်တာကိုပဲ ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။ အခု ဒီကိစ္စဆိုရင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာအရကြည့်ရင်လည်း မသင့်လျော်ဘူး။ အန်တီတောင် အန်တီ့သမီးကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ရမယ်' ဟု PARTY များတွင် SEXY DANCE ထည့်သွင်းလာသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
SEXY DANCE ဆိုလျှင်လည်း မည်သို့ကသည်မှာ လူတိုင်းသိပါသည်။ ထိုအကအား ပြိုင်ပွဲလုပ် ဦးမည်ဆိုသည့်အခြေအနေမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှက်အကြောက်ကြီးမားသည့် မြန်မာမိန်းကလေး များအတွက် ဖြစ်သင့်သည့် အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း မိဘအသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ် ထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ PARTY များတွင် စားသောက်ကြသည့်အခါ လူငယ်များဖြစ်သည့်အလျောက် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း သောက်ကြမည် မဟုတ်သည့်အတွက် ဖြစ်လာနိုင်မည့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများမှာ မိဘများအတွက် ရင်လေးဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။
' ညီမကတော့ အဲဒီလိုမျိုးတွေကို စ်ိတ်လည်း မဝင်စားပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ဆိုရင် သွားမယ်တကဲကဲနဲ့ အခုကတည်းက ဟန်ပြင်နေကြတာ၊ အိမ်ကအဆင်ပြေတဲ့လူတွေအတွက် တစ်သောင်း၊ နှစ်သောင်းက ပြဿနာ မဟုတ်ပေမဲ့ ညီမတို့ကျတော့ တစ်ထောင်၊နှစ်ထောင်တောင် တန်ဖိုးထားရတယ် ' ဟု နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ တတိယနှစ်တွင် တက်ရောက်နေသော မအေးချမ်းမွန်က လူငယ်များအတွက်ပြောကြားပေးခဲ့သည်။
Posted: 28 Aug 2012 03:40 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် ကိုဖြတ်၍ အာဆီယံ လမ်းမကြီး ဖောက်လုပ် မည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့်  နောင်ချို အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်မှာ ပေ(၆ဝ-၈ဝ)တစ်ကွက်လျှင် ကျပ်သိန်းထောင် ချီ၍ မြင့်တက် လာခဲ့သည်။
"လားရှိုးလမ်းဘေး အချက်ချာကျတဲ့ ဈေးရပ်ကွက်မှာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲဖွင့်ဖို့ ဝယ်သွားတာ ၆ဝ- ၈ဝ တစ်ကွက်ကို သိန်း(၁၅ဝဝ)နဲ့ ဝယ်သွားတယ်၊ အရောင်းအဝယ်ကတော့ အာဆီယံလမ်းဖောက်မယ်ဆိုလို့လား မသိဘူး သိသိသာသာမြင့်တက်လာတယ်"ဟု အိမ်၊ခြံ၊မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်သူ ကိုစိုင်းညီထွန်းက ပြောသည်။
နောင်ချိုမြို့ရှိ မန္တလေး-လားရှိုးလမ်းမဘေးတွင် ပေ၆ဝ-၈ဝမြေကွက်ကို သိန်း(၁၅ဝဝ)အထိ ပေါက်ဈေး ရှိနေပြီး၊ ဈေးရပ်ကွက်တွင် ကျပ်သိန်း(၆ဝဝ)မှ (၁ဝဝဝ)ဝန်းကျင်အထိဈေးရှိပြီး၊ အခြားလူသိများသည့် တောင်ရပ်ကွက်တွင် ကျပ်သိန်း(၆ဝဝ)ဝန်းကျင်၊ ဘူတာရပ်ကွက်တွင် ပေ၈ဝ- ၆ဝ တစ်ကွက်လျှင် ကျပ်သိန်း(၅ဝဝ)ဝန်းကျင်နှင့် ကံကြီးလမ်းဘေးတွင်ကျပ်သိန်း(၃ဝဝ)မှ (၅ဝဝ)အထိရှိပြီး ပါဟတ်ရပ်ကွက်တွင် ကျပ်သိန်း(၃ဝဝ)အထက် ဈေးရှိကြောင်း အကျိုးဆောင်များထံကသိရှိရသည်။
မန္တလေးနှင့်မိုင်(၈ဝ)ကျော်သာ ဝေးကွာခြင်း၊ တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ရှားသည့် ဂုတ်ထိပ် တံတားနှင့် ဂုတ်တွင်းတံတားများ၇ှိခြင်း၊ ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်း ဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူခြင်းကြောင့် ဝယ်သူစိတ်ကြိုက် နေရာဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး အိမ်"၊ခြံ၊မြေဈေးကွက်ပုိုမိုလှုပ်ရှားလာခဲ့သည်ဟု နယ်ခံကိုမျိုးက ပြောသည်။
ယခုနစ်သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အိမ်၊ခြံ။မြေဈေးကွက် အခွန်နှုန်း(၃ဝ)ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ တိုးမြင့်ခဲ့သော်လည်း နောင်ချို အိမ်ခြံမြေအရောင်အဝယ်ဈေးကွက်မှာ ဆက်လက်မြင့်တက်လျှက်ရှိကြောင်းကိုလည်း သိရှိရသည်။
အိမ်မြေဈေးကွက်မြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူ ဒေသခံတောင်သူများမှာလည်း မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်ယာမြေများအား အကွက်ရိုက်ရောင်းချမှုများရှိလာသည်။
'ပေ၆ဝ-၈ဝမြေကွက်တစ်ကွက်ကို အနည်းဆုံးသိန်း (၅ဝ)ရှိတယ်၊ နောက်ပိုင်းရောင်းလာရတော့ တောင်သူတွေတောင်မြေကို အကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းလာကြတယ်" ဟု အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မနန်းက ပြောသည်။
အာဆီယံလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ရန်အတွက် နောင်ချိုမြို့နယ်တွင်ယခုနှစ်လယ်ပိုင်းက စတင်တိုင်းထွာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့တွင်းမှဖြတ်သန်းရန်အတွက်တိုင်းထွာတာရာတွင်ဖျက်ရမည့် အဆောက်အဦး များပြားလွန်းသည့်အတွက် မြို့ပြင်မှ ပတ်သွားရန်အတွက် စီစဉ်နေပြီး မဆုံးဖြတ်ကျသေးကြောင်း ကိုလည်း မြို့ခံများထံက သိရှိရသည်။
Posted: 28 Aug 2012 03:37 AM PDT
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ရာ စွန့်ပစ်မြေ ဆီလွှာများနှင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ စုပုံခြင်းကြောင့်လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင် ရှိရွာအချို့သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ နှင့် ရင်ဆိုင်လာရ ကြောင်း မိုးကြိုးပြင် မြောက်ပိုင်း မှ ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။
အဆိုပါ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ တင်ပါဝင်သော ဓာတုဆေးဝါးများမှာ မြေဆီလွှာအတွင်းမှ သောက်သုံးရေကန်များအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေရှားပါးနေခြင်းဖြစ်သည်။'
''ကျွန်မတို့ရွာနဲ့၂မိုင်ကျော် ဝေးတဲ့ ရွာတွေမှာ သောက်ရေထဲ ဒုတ္ထ္ထာရေတွေဝင်ပြီး သောက်ရေ ရှားပါးနေပါပြီ။ သူတို့ အခု မြစ်ရေပဲ သောက်နေရတယ်'' ပာု မိုးကြိုးပြင်မြောက်ပိုင်းရွာမှ မမြင့်မြင့်သိန်းက ပြောသည်။
ကြေးနီတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နီးစပ်သည့် ကျေးရွာများဖြစ်သော ကန်ကုန်း၊ကန်တော ၊ရေကြည်ပင်၊ ရွေးပင်ကောက်၊ဝက်ဒန်း အစရှိသည့် ကျေးရွာများမှာ ထိုအခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒုတ္ထ္ထာရေများသည် ကော့ပါးဆာလဖိတ်များ အများဆုံးပါဝင်ပြီး အိုင်းယွန်းနှင့် ဇင့် သတ္ထုဓါတ်များလည်း ပါဝင်နေကြောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးထံက သိရှိရသည်။
''ဒုတ္ထ္ထာရေတွေသောက်မိရင် ကျောက်ကပ် မှာကျောက်တည်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ် ။ ကိုယ်အင်္ဂါ မညီမျှတာ ရောဂါတွေလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ် '' ဟု ရေနှင့်ပတ်သက်ပြီး နာလည်တတ်ကျွမ်းသည့် အထွေထွေ ရောဂါကုဆရာဝန် ဒေါက်တာမြင့်ဦးက ပြောသည်။
ထို့ပြင် အညစ်အကြေးနှင့်ဓါတုဆေးဝါးများရှိနေသည့် နေရာနှင့် ပေ(၅ဝ) အကွာတွင်သာ သောက်သုံးရေကန်များ ရှိသင့်ကြောင်း ထိုအချက်မှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သူမှလိုက်နာကျင့်သုံး ခြင်းမရှိသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါဆရာဝန်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရွာများရှိ ဒေသခံကလေးသူငယ်အချို့ မှာလည်း ဓာတုဆေးဝါးများ စိမ့်ဝင်သည့်ရေများ သောက်သုံးမိခြင်းကြောင့်ကိုယ်အင်္ဂါမညီမျှသော လက္ခဏာများ ခံစားလာရကြောင်း ဒေသခံများ ထံမှ သိရှိရသည်။
" ဒီရွာတွေက ကလေးအချို့ က ရေတွေကြောင့်လားတော့ မသိဘူး ဗိုက်ရွဲတာတွေ ခေါင်းကြီး ကိုယ်သေးတာတွေ ဖြစ်လာတယ်'' ပာု ရွာခံအမျိူးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မစုပုံရေးအတွက် ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများက အဓိကထား လူ၁ဝဝဝ ဝန်းကျင်က ကြေးနီစီမံကိန်းအနီးတွင် လယ်ယာမြေ မကျူးကျော်ရဆိုသည့်ဆိုင်းဘုတ် များဖြင့် သြဂုတ်လ(၂၅)နှင့်(၂၇)ရက်နေ့များတွင် သွားရောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသသည်။
လယ်မြေပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး ကျေးရွာ (၄) ရွာခန့်မှာ ရွာပျက်များ အဖြစ်သို ရောက်ရှိနေကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
''ကျွန်မတို့ဆန္ဒပြတော့ရဲတွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပုဒ်မ (၁၄၄)နဲ့ တားတယ်။ နောက်လည်း ဆန္ဒ ဆက်ပြမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုတော့ ဘာမှပြန်မပြောတော့ ဘူး။'' ပာု ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် လယ်မြေပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရပြီး ကျေးရွာ (၄) ရွာခန့်မှာ ရွာပျက်များ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သာမက စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၂)ကျောင်းပါ သိမ်းယူခြင်းခံခဲ့ ရကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။
ထို့သို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားလာနိုင်ခြင်းနှင့်ဓာတုပစ္စည်း အန္တရယ်ခံစားလာနိုင်ခြင်း ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် ဇူလိုင် ၂၈ရက်နှင့် ၂၉ရက်တွင် ခံစားနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် သြဂုတ်(၂၁)ရက်တွင် ကြေးနီစီမံကိန်းအား ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted: 28 Aug 2012 03:31 AM PDT
မွေးရာပါ ဦးနှောက်ကျွံ ရောဂါဖြင့် ဦးခေါင်းတစ်ခုစာ အသားပို ပါလာသော ကလေးငယ် တစ်ဦး ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ခွဲစိတ်ဌာနတွင် တက်ရောက်ကုသ နေကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၁ လနှင့်ရက် ၂၀ ရှိ အဆိုပါ ကလေးငယ်သည် ----
Posted: 28 Aug 2012 03:04 AM PDT
မူဆယ် ... မန္တလေး လမ်းတလျှောက် ..အသက်ကို ပဓာန မထားဘဲ မိသားစု စား ဝတ်နေရေး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနေကြတဲ့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီ သယ်တဲ့ လူ တွေ ပါ …အရင် ကထက် ထုထည် ကြီးမား လာတာ က ..လမ်းကြေး ပေးရတာများ လာ လို့ ..အရင် ၃ စီး ကနေ ..အခု ၅ စီး ထိ တိုး သယ် လာတာ တဲ့ ..ဆိုင်ကယ် တစ်စီး ပေါ် ငါး စီး တင် ..စုစုပေါင်း ၆ စီး နဲ့ ..
ပြင်ဦးလွင် ၁၈ မိုင် ကျော်ပြီး ချိန် မှာ ..---
Posted: 28 Aug 2012 02:54 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ ၂၂.၈.၂၀၁၂ ရက်နေ့ ည ၁ဝ နာရီခွဲ အချိန်တွင် စာကျက်ဝိုင်းမှ ပြန်လာသော အထက (၇) ကျောင်းသား ခွန်အောင်ခမ်းဦး အသက်(၁၆) နှစ် နှင့် အောင်သိန်းဦး (၁၆) နှစ် ၁၀ တန်းကျောင်းသား တို့သည် စာကျက်ဝိုင်းမှ ဆိုင်ကယ်နှင် ပြန်လာစဉ် အုပ်စုဖွဲ့ ပြီး ဝိုင်းရိုက်ခံရ ----
Posted: 28 Aug 2012 01:57 AM PDT
ယခု ကျင်းပ လျက်ရှိသည့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော် အသီးသီးက ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီ၊ ကော်မရှင်နှင့် အဖွဲ့တို့အား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်း မရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးအား စွပ်စွဲပြစ်တင်သည့် အဆိုဆွေးနွေး လျက်ရှိသည်။
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မိုးက ခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှားယွင်းမှုမရှိကြောင်းပြောသည်။ ၄င်းက"ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က လူအများဖြစ်၍ လက်မခံနိုင်ယုံမျှဖြင့် စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် မညီညွတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သွားပါမယ်"ဟုပြောပြီး ပြည်သူ့အကျိုးရှေးရှု၍ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသင့်ကြောင်း ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ခုံရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျော်လွန်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဆွေးနွေးနေသည့် စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းသည် အခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုကို ထောက်ခံကြောင်း ပြောသည်။
ယင်းအဆိုကို ယနေ့ညနေတွင် အဆုံးဖြတ်ရယူမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ ထောက်ခံပါက အတည်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
Posted: 28 Aug 2012 01:50 AM PDT
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဟာ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော် သင်္ဂဟ ဟိုတယ်မှာ UNFPA ဒါရိုက်တာ Dr.Babatunde Osotimehin နဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ညနေ ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီထိ တွေ့ဆုံတဲ့ ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ UNFPA ရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တွေ ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကြောင်းနဲ့ လူငယ်မြင့်တင်ရေး၊ အသက်ကြီး သူတွေကို စောင့်ရှောက့်ရေး၊ အမျိုးသမီး တွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အထူးသဖြင့် စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာခံခဲ့ရသော အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာ UNFPA နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြည်သူလူထု ကြားမှာ ICPD အတွက် လူတွေသိစေရန်အလို့ငှာ UNFPA အားထောက်ခံအားပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၊ ၁၈ ရက်နေ့ က မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဘုံသာရပ်၊
ရဲသင်တန်း ကျောင်းအနီး မှာ ရဲတပ်ကြပ် တစ်ဦးက အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် အမျိူး
သမီးကြီး တစ်ဦးကို ခဲနဲ့ ထုနှက်ရိုက်ခဲ့ပီး သတိမေ့ သွားချိန်မှာ ရွှေထည် ပစ္စည်းတွေ ကို
ယူဆောင်သွားခဲ့တဲ့ အမူ့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အခုဖြစ်ပွား ခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပီး ရိုက်နှက်
မူ့ ကျူးလွန်ခဲ့ သူကို ရေနံချောင်း ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီး အမူ့ဖွင့် ထားပါတယ်။
ရိုက်နှက်ခံရသူ ဒေါ်ဝင်းမြင့် ကတော့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် မကွေး ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ
တင်ထားရပါတယ်။ အခုအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပက်သက်ပီး ရိုက်နှက်ခံရသူ ကာယကံရှင်ကို
ဆေးရုံပေါ်မှာ သွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်။ DVB TV News
Posted: 28 Aug 2012 01:19 AM PDT
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံ ထားရမှု ပြန်လည်ရရှိရေး ၊လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရပ်တန့်ရေးနှင့် လူသား ချင်းစာနာမှု မရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အလိုမရှိ စသည့် အချက်များ ကိုတောင်း ဆိုဆန္ဒပြမည်ဟု ဦးဆောင်လှုပ်ရှား ပါဝင်မည့်သူ ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
""ကချင်ပြည်နယ်ဟူးကောင်း ချိုင့်ဝှမ်းကလယ်ဧ ကနှစ်သိန်းကျော် လောက် ကို ယုဇနကုပ္မဏီက သိမ်းယူထား တာတယ်။ ရန်ကုန်ကယုဇနကုပ္မဏီ ရုံး ချုပ် ရှေ့ကိုကျွန်မတို့အယောက်၅ဝလောက် က ပိုစတာတွေ ကိုင်ပြီးနိုင်ငံတော် သီချင်းဆို မယ်။ဟောပြောပွဲကိုလည်း လုပ်မယ်။ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လယ်သိမ်းခံထားရတာတွေကို လည်းဟေြာေ ပာတင်ပြ တောင်း ဆိုသွား မယ်""ဟုဒေါ်ဘောက်ဂျာ ကပြော သည်။
ယင်းကဲ့သို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နိုင် ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်း သို့လည်းတင်ပြထားရာခွင့်ပြုချက်ရထား ပြီဖြစ်ကြောင်း လည်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ပြောသည်။
""သြဂုတ်၃ဝရက်နေ့မနက် ၁၁နာရီကနေ၁နာရီထိ ဆန္ဒပြခွင့်ပေးထား တယ်။ကျွန်မတို့တောင်းဆိုတာက မနက် ၁ဝနာရီကနေ၁နာရီထိေ တာင်းဆိုပေမယ့် တစ်နာရီပယ်ချ ခံလိုက်ရတယ်""ဟုယင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းသို့သြ ဂုတ်၂၈ ရက် နေ့မွန်းလွဲ၁၂နာရီခွဲခန့်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ဟုတ်မှန် ကြောင်းဖြင့်တာဝန် ကျ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
""အကြောင်းအရာကတော့မှန် ပါတယ်။အထက်ဌာနအဆင့်ဆင့်ဆီကို တင်ပြထားတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးက ခွင့်ပြုမိန့်ချထားပေးရမှာပါ""ဟုအဆိုပါ ဝန်ထမ်းကဆိုသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ရုံးမှလည်း အဆိုပါကိစ္စရပ်သည် ရဲစခန်း နှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းတာဝန်ကျဝန် ထမ်းတစ်ဦးက အဆိုပါနေ့ရက် အချိန်ခန့် ကပင် ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျော်သူ - Yangon Media Group
Posted: 28 Aug 2012 01:06 AM PDT
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ်-၂၈တာမွေအ၀ိုင်းအနီး အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရာတွင် ယနေ့သြဂုတ် ၂၈ ရက် ၇နာရီ ၄၀ မိနစ်ကျော်က တွေ့ရသော ဗုံးဟုယူဆရသည့် အထုပ်မှာ ဗုံးမဟုတ်ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက 7Day News ၏ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဗုံးလန့်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ယင်းအိမ်ရာတွင် နေထိုင်သူများက ပြောသည်။
ပေါက်ကွဲပစ္စည်းဟု ယူဆရသောအရာကို ယင်းအိမ်ရာတွင် ရပ်တန့်ထားသော အဖြူရောင် မီနီလိုက်ထရပ်ကား နောက်ခန်းအတွင်းတွင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အမည်းဖြင့် ထုပ်ထားခြင်းကို ယင်းကား၏ ယာဉ်မောင်းက စတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ ပုဂိုလ်များက ပြောသည်။ ဗုံးဟု မသင်္ကာဖွယ်ရာ အဆိုပါပစ္စည်းကို တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး နံနက် ၁၀ နာရီ ခန့်က ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ သံသယဖြစ်ဖွယ် အထုပ်ကို အောင်ချမ်းသာအိမ်ရာရှိ ဒီလှိုင်းစာစောင်ရုံးခန်း မျက်နှာချင်းဆိုင် လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ရပ်ထားသော ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကားထဲမှတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
Posted: 27 Aug 2012 11:20 PM PDT
မိတ္ထီလာမြို့ အောင်ဆန်း နယ်မြေ(၁) ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ် ရောင်းချနေသော ကျော် စက်သုံး ဆီဆိုင်ကို မြို့ပြင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ပေးရန် ၄င်းရပ်ကွက်ရှိ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများက ယနေ့နံနက် (၉)နာရီမှ စတင်ကာ နည်းဥပဒေနှင့် အညီ တစ်နာရီခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ကြောင်း---
ဓာတ်ပုံ- ညီညီဇော် - 7Day News Journal
Posted: 27 Aug 2012 10:58 PM PDT
Posted: 27 Aug 2012 10:34 PM PDT
မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်း IFI တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ဘဏ္ဍာငွေကြေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင် သာမှုရှိဖို့အတွက် အမေရိကန် အစိုးရက လုပ်ဆောင်ဖို့ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ရဲ့ ထိပ်တန်း လွှတ်တော် အမတ်နှစ်ဦးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရီပတ်ဘလီကန်လွှတ်တော် အမတ် စပန်ဆာ ဘက်ခပ်စ် (Spencer Bachus) နဲ့ ကော်မတီရဲ့ဝါရင့်အဖွဲ့ဝင် ဒီမိုကရက်တစ် လွှတ်တော်အမတ် ဘာရ်နီ ဖရန့်က် (Barney Frank) တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ စွဲနဲ့ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး တင်မ်သီ ဂိုင်သ်နာ (Timothy Geithner) ဆီ ပေးပို့တဲ့ စာထဲမှာ အဲဒီလို တိုက်တွန်းထားတာပါ။
Posted: 27 Aug 2012 10:30 PM PDT
"ဂျပန်အစိုးရရဲ့ ODA (Oversea Development Agency) ကနေပြီးတော့ ချေးငွေ ထုတ်ချေးမယ့် အစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကနေ MOU ထိုးပြီးမှ လုပ်ပေးတဲ့ အစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း သန်းပေါင်း ၉၉၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက်ပါ''
"ကျွန်တော်တို့ ၀ဥ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နွားနောက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အများကြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာပေါ့။ အခုက ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်း လုပ်ချင်ပေမယ့်လည်း ငွေကြေး ရင်းနှီးမှုက ခက်ခဲနေကြတာကိုး။ ပြည်သူလူထုက ခုလို ချေးငွေတွေ လာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုမှာပေါ့''
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် (UNDP) 2011 ခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ ချင်းပြည်နယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း ၁၄ ခုထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး၊ အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 27 Aug 2012 10:25 PM PDT
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ
ခံ ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်း၊ ဥပဒေရေ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်ခြင်း တို့အရ စွပ်စွဲပြစ်တင် သည့်အဆို ကို ပထမအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး(၃၄)ရက်နေ့မြောက်နေ့ (၂၈.၈.၂၀၁၂)အင်္ဂါနေ့တွင် အမျိုးသား လွတ်တော်တွင် တင်ဆွေးနွေး ကြမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအဆိုက်ို အမျိူးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ဦးကဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း၁၆ဦးအနက်၆ဦး
ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးမှုအပြီး တွင်ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ယင်းနောက်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်၏အဆုံးအဖြတ် ရယူမည်ဟုသတင်းရရှိသည်။
ပါဝင်ဆွေးနွေးမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ဦး၏ အမည်စာရင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁)ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) မှ ဒေါက်တာအေးမောင်
(၂)ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃)မှ ဦးဘရန်ရှောင်
(၅)ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၄) ဦးစိုင်းသန့်ဇင်
(၆)ချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) မှ ဦးဇုန်လှယ်ထန်း
(၇)တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှုးကြီး ခင်စိုး
(၉)မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇) မှဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး
(၁၀)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်
(၁၂) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇)မှ ဦးတင်မြ
(၁၃) ရှမ်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၉)မှ ဦးနေ၀င်းထွန်း
(၁၅)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃) ဦးဖုန်းမြင့်အောင်
(၁၆)ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၆)မှ ဦးခင်မောင်ရီ တို့ဖြစ်သည်။
Posted: 27 Aug 2012 10:17 PM PDT
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေ မြို့နယ် အ၀ိုင်းထိပ်အနီး အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရာရှိ ဒီလှိုင်းဂျာနယ် ဖြန့်ချိရာ ရုံးခန်းရှေ့တွင် ပေါက်ကွဲ စေနိုင်သည့် ပစ္စည်း အချို့ကို ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီခန့်က
တွေ့ရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။----
Posted: 27 Aug 2012 10:06 PM PDT
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရမှ ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် အမည်မည်းစာရင်းဝင် စုစုပေါင်း(၆၁၆၅)ဦး ရှိသည့်အနက် ပြောင်းလဲလာသည့်မူဝါဒများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး စုစုပေါင်း (၂၀၈၂)ဦးအား အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်းနှင့် အမည်မည်းစာရင်းမှပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရသည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာနိုင်ရေး
အတွက် ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
ယခင်က နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်ခြင်းအ
လို့ငှာ ကုမ္ပဏီများ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သတင်းမီဒီယာသမားများအပါအ၀င် အချို့အား အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အမည်မည်းစာရင်း(Black List) သတ်မှတ်ရေးသွင်းပြီး ကန့်သတ်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်နှင့်အညီ ဖြေလျော့မှုများ ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းသတင်း တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
Posted: 27 Aug 2012 10:01 PM PDT
၂၀၁၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ စတင်ရောက် ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်၍ ဒီမိုကရေ စီရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ကြုံတွေ့လာရသည်။ သို့သော်လည်း စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲမှုများကား လိုအပ် နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြောင်းလဲမှုများစွာနှင့် ကြိုးစား ရုန်းကန်မှုများအား မလွဲဧကန် တွေ့ရပေမည်။ ထို့အပြင် ပဋိပက္ခများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရပေဦးမည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်အတွင်း၌ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားနေသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်ကြ ပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြရမည်ဆိုလျှင် ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လွှတ်တော်တွင်း ပဋိပက္ခနှင့် လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရသည့် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးပဋိပက္ခသည် အထင်အရှားဖြစ်သည်။
ထိုပဋိပက္ခများမှ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်အတွင်း ပြင်းထန်သော ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများအား ဖြစ်ပေါ်
စေခဲ့ပေသည်။ ယခုအချိန်တွင် လူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင် သဘောထားများအား ထုတ်ဖော် လာကြပေသည်။ ထိုအချက်သည် အမိန့်အာဏာအား လွန်ဆန်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလျက် (သို့) မိမိတို့ ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားများအတိုင်း တသဝေမတိန်း လိုက်လံ လုပ်ဆောင်ခြင်း ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ရပ်တည်ချက်များသည် အရေးပါပေသည်။
သို့သော် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခြင်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အဟန့်အတား ဖြစ်ပေါ်စေနိုင် ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈နေ့တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်မှ 'လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသော ဥပဒေမူကြမ်းများအား အခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှ စီစစ်အတည်ပြုပေးရမည်' ဆိုသော အဆိုအား ထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေး ငြင်းခုံမှုများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် အဖွဲ့ဝင်များမှ ထိုအဆိုအား ထောက်ခံ သော်လည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ရလာဒ်က လွှတ်တော် နှစ်ရပ်အတွင်း ပြင်းထန်သော ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ စိုးရင်မှ 'ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် လွှတ်တော် ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ' ဟု ဆိုကာ ရုတ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကလည်း ဒေါက်တာ စိုးရင်၏ အဆိုကို ထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် 'အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးအား အတည်ပြုပြီးသော ဥပဒေမူကြမ်းများ တင်ပြရခြင်းသည် လွှတ်တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိခိုက်စေသည်' ဟု အတည်ပြုပြောကြားလိုက်သည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ဦးခင်အောင်မြင့်မှ 'ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်များအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အား လေးစားသော အနေဖြင့် ထို ဆုံးဖြတ်အားရုတ်သိမ်း ခဲ့သည်"ဟူ၍ ပေါ်ထွက်လာသည်။
ဧပြီလတွင် ကျင်းပသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ဒီချုပ်ပါတီမှ (၄၃)နေရာ အနိုင်ရပြီးနောက် လွှတ်တော်အတွင်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း နေရာ အများစုအား ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ရယူထားသော်လည်း လွှတ်တော်မှ ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိလာခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ထဲသို့ ဒေါ်စု ရောက်ရှိ ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ မျှော်လင့်ချက်များ ပိုမိုတောက်ပလာခဲ့ကြသည်။
အခြေခံဥပဒေခုံရုံး ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ လွှတ်တော်အတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသည့် ရေးရာကော်မတီများအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် သတ်မှတ်ပေးရန် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှ ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုရေးရာ ကော်မတီများသည် ဝန်ကြီး ဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လွှတ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြန်လည်စီစစ်ရန်နှင့် ထိန်းညှိပေးရန် ဖြစ်သည်' ဟု လွှတ်တော် အမတ်များယုံကြည်ကြသည်။ ထိုရေးရာ ကော်မတီများအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်မှုအား တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် လွှတ်တော်အမတ် (၃၀၁)ဦးက လတ်မှတ်ရေးထိုးကာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှတဆင့် သမ္မတဆီသို့ စာတင်ခဲ့သည်။ ထိုစာတွင် အမတ်များမှ 'အခြေခံဥပဒေခုံရုံးသည် ပုဒ်မ ၃၃၄ အပိုဒ်ခွဲ (က) အား ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ၎င်းခုံရုံးအား ဖျက်သိမ်းပေးရန်' တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လွှတ်တော် ဥက္ကဌမှ သမ္မတအား ထိုကိစ္စအား နှစ်ဖက် နစ်နာမှုမရှိအောင် ဖြေရှင်းပေးရန်တောင်းဆို၍ ဩဂုတ် (၁၄)ရက် နေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ဩဂုတ်လ ၂၀ရက်နေ့တွင် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးမှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် အခြေခံဥပဒေအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ရုတ်သိမ်းပေးရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံး ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိုးမှ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပုဒ်မ ၃၀၂ အပိုဒ်ခွဲ ၅အရ အားချိုးဖောက်သည် ဆိုခြင်းသည် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် အခြေခံဥပဒေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားထားသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတမှလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အား 'ခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခြင်းသည် မသင့် လျော်ကြောင်း' ဖြေကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ သမ္မတမှ 'အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအား နှုတ်ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း' ပြန်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် အခန်း ၁၂တွင် ပါဝင်သော အချက် အလက်များအတိုင်း အခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်၍ ရေးရာကော်မတီများအား အတည်ပြုနိုင်ကြောင်း အကြံဉာဏ် ပေးခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များမှ 'ဤဖြစ်ရပ်သည် အခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်လောက်သည် အထိ ကြီးမားသော ကိစ္စမဟုတ်' ဟု ဆိုကာ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးအား တရားစွဲရန် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီအတွက် ကောင်းမွန်သော ပဋိပက္ခ
ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်များအား သုံးသပ်ကြည့်ပါက ပထမအကြိမ် ပဋိပက္ခသည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒီချုပ်ပါတီ လွှတ်တော် အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်မီ ကတည်းကဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အရေးပါသော လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲမှုသည် လွှတ်တော်အတွင်း၌ ရှိနေနှင့်ပြီးဖြစ်ပေသည်။ မိမိတို့၏ သဘောထားများအား ဖော်ပြခြင်းမရှိပဲ အခြားသူ၏ သဘောထားအား လက်ခံခြင်းထက် ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရပ်တည်ချက် သဘောထားများအား ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပေသည်။
ယင်းပဋိပက္ခအတွင်းတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အကြား သဘောထားကွဲလွဲမှု များဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အမတ်များအနေဖြင့် တူညီသော ပါတီမှ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မတူညီသော သဘောထားများအား တင်ပြလာခြင်းမှာ ကောင်းမွန်သော လက္ခဏာပင်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ရပ်တည်ချက်မျိုးသည် ပါတီစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကြီးမားသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲမှုအတွက် အရေးပါသောအချက်လည်း ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယဖြစ်သည့် အခြေခံဥပဒေခုံရုံး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဒီချုပ်ပါတီသည် ဒေါ်စုသည် လွှတ်တော်အတွင်းတွင် ရောက်ရှိနေနှင့် ပြီးဖြစ်သည်။ ဤပဋိပက္ခတွင် အတိုက်အခံ ပါတီမှ အမတ်များသာမက အာဏာရပါတီမှ အမတ်များအပါအဝင် လွှတ်တော် အမတ် ၃၀၁ ဦးမှ တောင်ဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤပဋိပက္ခသည်လည်း ဥပဒေပြုရေးဌာနအတွင်းရှိ အမြင်မတူသော အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့၏ သဘောထားရေးရာ ကွဲလွဲမှုပင်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် အကြောင်းအရာများအား မတူညီသော ရှုထောင့်များမှ ဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီး ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းအား ရှာဖွေမြဲပင်ဖြစ်သည်။
ပဋိပက္ခများက အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်များအား နှောင့်နှေးစေ
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ထိုကဲ့သို့သော ပဋိပက္ခများအား ကြာမြင့်စွာ ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေခြင်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား နှောင့်ယှက်ဟန့်တားနိုင်ပေသည်။ ထိုမျှသာမက နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆုတ်ယုတ်မှုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် စစ်မှန်သော လွတ်လပ်မှုအား ရရှိကာစအချိန်တွင် ထိုလွတ်လပ်မှုများ ဆုံးရှုံး၍ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ယခုအချိန်တွင် လွှတ်တော်အတွင်း၌ အတိုက်အခံများအား နေရာပေးထားသော်လည်း ပြည်တွင်း စစ်မီးအား အဆုံးသတ်ရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများအား ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ဖော်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ် နေပေသေးသည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော တိုက်ပွဲများကြောင့် အသက်ပေါင်း များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အပြင် လူထောင်ပေါင်း များစွာလည်း နေရာဒေသများအား စွန့်ခွာထွက်ပြေး ခဲ့ရသည်။ လက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ ကျန်ရှိနေပေးသည်။
(သို့သော်လည်း ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လမ်းလာသည်နှင့်အမျှ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ တစ်စထက်တစ်စ လျော့နည်းလာမည်မှာ မုတ်ချဧကန်ပင်ဖြစ်ပေသည်။)
ဒီမိုကရေစီအား ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးအား ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ရာ ဒေသများကို ကူညီမှုများပေးရန်နှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုအား တိုက်ဖျက်ပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။ မကြာသေးမီက ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများသည် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို ထောက်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများအား လျော့ပေါ့ပေးလိုက်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အရေးများအား ဖော်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သတင်းမီဒီယာများ အနေနှင့် တရားစွဲခံရခြင်းအား စိုးရိမ်နေမှုများ ရှိနေပေသည်။ ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်သည် အရေးပါသော ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပေသည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရအတွင်း၌ ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် ပိုမို၍ မှန်ကန်သော သတင်းများအား ဖော်ပြလာကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အရေးပါသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေသည်။ အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအားလည်း ပိုမို၍ သိမြင်ခွင့်ရရှိလာကြပြီဖြစ်သည်။ တဆက်တည်းမှာပင် အစိုးရအနေဖြင့် (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရေကြီးဒေသများကဲ့သို့သော) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံနေရသောနေရာများအား အကူအညီများပေးရန်၊ ပြည်တွင်းစစ်များအား အဆုံးသတ်ပေးရန်နှင့် (ကချင်ဒေသကဲ့သို့သော) တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များ ကျန်ရှိနေသေးသည်။
Posted: 27 Aug 2012 10:02 PM PDT
ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ၏ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု အစီအစဉ်အရ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအား ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အသွင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ် ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက်ငွေကို မှီခိုအသုံးမပြုသည့် ကော်ပိုရေးရှင်း အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ရန်---
Posted: 27 Aug 2012 09:40 PM PDT
KMD Group ရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးသောင်းတင်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကြံပေး ကောင်စီဝင် ကနေ ဒုဝန်ကြီး (ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန) အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။
အရပ်ဖက် ပညာရှင် တစ်ဦးအနေဖြင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း (ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန) အတွင်းသို့ ပထမဦးဆုံး ရောက်ရှိ လာခဲ့သူပါ။
ဦးသောင်းတင်ဟာ ၁၉၉၀ ပြည်နှစ် လောက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကွန်ပျူတာလောကကို ဦးဆောင် လမ်းပြအဖြစ် လုပ်ကိုင်လာခဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာသေးမီက အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေကို အလကားပေးမယ်လို့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို အကြံအဥာဏ် ပြုခဲ့သူလည်းဖြစ်ကြောင်း Internet Journal - Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
(ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန) ဒုဝန်ကြီး ခန့် အပ်ခံရသူ ဦးသောင်တင် (ဓါတ်ပုံ - Internet Journal )
လူအများအနေဖြင့် ၅ ထောင်တန် ဖုန်းထွက် ရှိလာလျှင် ကောင်းမည်ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ၅ သောင်းတန် ဖုန်းထွက်ရှိ လာလျှင် ကောင်းမည်ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေကြ သော်လည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကြံပေး ကောင်စီဝင် ဦးသောင်းတင်က မိုဘိုင်း ဖုန်းလိုင်းများ၏ ဈေးနှုန်းသည် မည်သည့် ဈေးနှုန်းမှ သင့်တော်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာ နည်းတူ မိုဘိုင်း ဖုန်းလိုင်းများကို အလကားပေး ရမည်ဟု ----
သမ္မတရုံးမှ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကြံပေး ကောင်စီဝင် ဦးသောင်းတင်
Posted: 27 Aug 2012 08:47 PM PDT